Baarlamaanka Jubbaland oo meel mariyey Guddiga Doorashooyinka oo xalay la sameeyey – Kalfadhi
Golaha Wakiillada Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa maanta kulanlkooda 69-aad ee Kalfadhiga 4-aad ku meel mariyey Xubnaha Guddiga Doorashooyinka iyo Xuduudaha Jubbaland, oo uu shalay magacaabay Madaxweynaha Jubbland, Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe).
Tirada Xildhibaannada fadhisay kulanka Baarlamaanka Dowlad Goboleedkaas, oo lagu sheegay 54 Xildhibaan, ayaa la sheegay iney 53 ka mid ah gacanta u wada taageen in la ogolaado guddigaas. Ma jirin diiday, balse waxaa ka aamusay hal xildhibaan u codeynta guddigaas oo ka kooban 7 xubnood.
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Jubbaland, Sh. Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, oo kulankii maanta shir-guddoominayey Baarlamaanka Jubbaland, ayaa Golaha uga hor dhawaaqay inuu Guddiga Doorashooyinka iyo Xuduudha Jubbaland yahay sharci, maanta wixii ka dambeeya.
Guddiga uu ansixiyey Golaha Wakiillada Jubbaland ma cadda cidda guddoon u ah, waana 7 xubnood oo sida ay u kala dambeynayaan aysan ku cadeyn warqadda lagu magacaabay. Lama oga in ay Guddoon iyagu sameysanayaan iyo in kale iyo inuu qofka Lambarka 1-aad ku qoran yahay Guddoomiye.
Laakiin dad, ay ka mid yihiin Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa ugu hambalyeynaya Zamza Cabdi Barre inuu yahay Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Jubbaland ee uu xalay fiidkii ku dhawaaqay Madaxweynaha Jubblanad, Axmed Madoobe.
Meel marinta Baarlamaanka Jubbaland ee guddigaas ayaa ka dhigan inuu hadda wixii ka dambeeya gudan karo shaqadiisa ah inuu qaban-qaabiyo, bilaabo, uuna meel mariyo, ugu dambeyntiina uu ku guuleysto iney Doorashooyinka Baarlamaanka iyo tan Madaxweynaha ka dhacaan Jubbaland, ka hor Agoosto 2019-ka.